WLDH marindrano fehy Mixer - China Changzhou Daming fanafody Fitaovana
Miasa Fitsipika milina ity dia ahitana ny fitoeran-javatra, Sokiro paddles nampientam-po sy ny tetezamita faritra; ny visy paddle dia amin'ny ankapobeny natao ho 1 sosona na 3 sosona, ny ivelany visy converge dia ilay fanazavana ny foibe avy amin'ny lafiny roa, ary ny anatiny sosona visy mampita ny fanazavana ho an'ny lafiny roa avy ao amin'ny foibe, mba avy convection fampifangaroana . Toetra mampiavaka Big coefficient ny Loading, faritra kely tsy hipetrapetra-poana. Sarotra ny manadio rehefa ampiasaina mba afangaro adhesive viscous na ara-nofo. ...
Milina io dia ahitana ny fitoeran-javatra, Sokiro paddles nampientam-po sy ny tetezamita faritra; ny visy paddle dia amin'ny ankapobeny natao ho 1 sosona na 3 sosona, ny ivelany visy converge dia ilay fanazavana ny foibe avy amin'ny lafiny roa, ary ny anatiny sosona visy mampita ny fanazavana ho an'ny lafiny roa avy ao amin'ny foibe, mba avy convection fampifangaroana .
Big coefficient ny Loading, faritra kely tsy hipetrapetra-poana.
Sarotra ny manadio rehefa ampiasaina mba afangaro adhesive viscous na ara-nofo.
Fitaovana ho mifangaro
Ny kofehy Mixer no ampiasaina ao amin'ny mampifangaro ny vovoka adhesive viscous na ara-nofo, na ny mampifangaro ny vovo izay mila ampiana ranon-javatra, ary apetaho fitaovana. Mandritra izany fotoana izany, satria sarotra ny manadio viscous ara-nofo, ny milina dia mety ho ny mampifangaro raharaha, izay ny Output malalaka ary tsy misy mila fifindra samihafa ara-nofo matetika.
mifangaro vola / batch
Fanamarihana: Ny entana voalaza etsy ambony dia azo atao amin'ny carbonaceous vy C na Stainless vy P
Previous: SYH Series amin'ny lafiny telo Mixer
Next: VHJ series Mixer
Blade mifanerasera Machine
Double bongo Mixer
zezika mampifangaro Machine
zezika Powder mifanerasera Machine
High Fahaizan'ny Trondro fanafody mifanerasera Machine
Laboratory fingotra mampifangaro Machine
Mixer / mifanerasera amin'ny Mpanampy Engine
fanafody mifanerasera Machine
fanafody Powder mifanerasera Machine
Powder mifangaro Machine
Rapid fanafody mifangaro Machine
fingotra mifanerasera Machine
Tank Modely mifanerasera-Machine
telo ny fihetsika amin'ny lafiny Mixer
tavy fisotroana Type Mixer
tavy fisotroana Type mifanerasera Machine
Wldh Series marindrano fehy Mixer
HJ Series avo roa heny cone Mixer
SYH Series amin'ny lafiny telo Mixer